Sawirro: Tarxiil ka billowday Somalia iyo ajaaniibtii ugu horreysay oo maanta la masaafuriyey (Dalkee u dhasheen?) - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Tarxiil ka billowday Somalia iyo ajaaniibtii ugu horreysay oo maanta la...
Sawirro: Tarxiil ka billowday Somalia iyo ajaaniibtii ugu horreysay oo maanta la masaafuriyey (Dalkee u dhasheen?)
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka hadda kusoo dhacay xafiiska warqabadka Caasimadda Online ee magaalada Muqdisho ayaa ka dhawaajinayo inay dowladda Soomaaliya qaaday tallaabo aad loogu riyaaqay markii ay dalka ka musaafurisay dad kasoo jeedo dalka Kenya.
Wararka ayaa xaqiijinayo in Maanta Magaalada Muqdisho laga musaafuriyey laba nin oo kasoo jeedo dalka Kenya markii lagu eedeeyey inay dalka kusoo galeyn sharci darro.
Labadan nin ayaa la sheegay in si sharci darro ah ay ku joogeen Soomaaliya isla markaana ay markii horana si dhuumaaleysi ah kusoo galeen.
Tallaabooyinka Soomaaliya looga musafurinayo dadka ajaanibta ah weliba kuwa kasoo jeedo Kenya ayaa maalmihii dambe si xooli ah uga socdo Magaalada Muqdisho taasoo muujineyso awoodda Dowladda.
Dhowaan Maamulka Galmudug ayaa Musaafuriyay kalumeysato reer Yemen ah oo si sharcidarro ah kaga kaga jilaabanayay Xeebaha badda Soomaaliya .
Kenya ayaa soohdin la wadaagta Soomaaliya waxaana shaqaale badan ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo ka shaqeeya Hotelada iyo Dhismooyinka ka socda caasimadda Muqdisho waxana jira shaqaale badan oo u soo shaqo raadsaday Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa looga bartay inay dalkeeda markasta kasoo musaafuriso muwaadiniinta kasoo jeedo wadanka Soopmaaliya.
Dadka Muqdisho ayaa si weyn usoo dhaweeyey talaabada ay dowladda maanta qaaday waxayna sheegeyn inay midaas keeni doonto in Kenya ay iska dhaafto Soomaalida ay soo musaafurineyso ama ay dalka Soomaaliya isaga baxdo.